China ephakamisa ibhakede mobile station ifektri kanye nabaphakeli Shantui
Izisetshenziswa Zokukhonkolo Zokhonkolo
Indawo Yokuhweba Yokhonkolo Wentengiso
Ukhonkolo Wamaloli Wekhonkrithi
Asphalt batching isitshalo
Indawo Yokuxuba Umgwaqo
Izinsiza Zokuhambisa Eziphathekayo
Isisetshenziswa Sokulahla Ukusingathwa Kwenkunkuma
Isitshalo Sokuxubana Nosimende
Isitshalo se-motar esomile
Isisetshenziswa Sokumaka Isihlabathi
Isitshalo sokubhaka ukhonkolo weselula
Ukuphakamisa isiteshi samabhakede eselula
ukhonkolo mahhala ukhonkolo ba ...
Belt uhlobo batching ukhonkolo ...
Ukuhlangana okulula nokuqaqa, ukuhamba okuphezulu kokuguquka, ukusebenziseka kalula futhi okusheshayo, nokuvumelana kahle nomsebenzi wesiza.
Umhlangano we-1.Convenient nokuqaqa, ukuhamba okuphezulu kwenguquko, elula futhi esheshayo, futhi ephelele indawo yokusebenza ehambelana nezimo.
Isakhiwo 2.Compact futhi enengqondo, high modularity design;
Ukusebenza kucacile futhi ukusebenza kuzinzile.
4.Umhlaba ongaphansi, ukukhiqiza okuphezulu;
Isistimu kagesi nohlelo lwegesi ifakwe okuphezulu nokuthembeka okuphezulu.
Ukukhiqizwa kwemfundiso m³ / h 25 40 50 75
Isihlanganisi Imodi JS500 JS750 JS1000 JS1500
Amandla okushayela （kW） 18.5 30 2X18.5 2X30
Ikhipha amandla （L） 500 750 1000 1500
Ubukhulu obukhulu obuhlanganisiwe （Gravel / Pebble mm） ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
Umgqomo wokushaya Ivolumu m³ 4X4 4X4 4X4 4X4
Hoist motor amandla motor kW） 5.5 7.5 18.5 22
Ukukala ibanga nokunemba kwesilinganiso Isilinganiso kg 1500 ± 2% 1500 ± 2% 2000 ± 2% 3000 ± 2%
Usimende kg 300 ± 1% 400 ± 1% 500 ± 1% 800 ± 1%
Amanzi kg 150 ± 1% 200 ± 1% 200 ± 1% 300 ± 1%
I-kg eyengeziwe 20 ± 1% 20 ± 1% 20 ± 1% 30 ± 1%
Ukukhulula ukuphakama m 3.8 3.8 4.1 4.1
Amandla aphelele m 40 49 74 101
Langaphambilini isisekelo sokubhaka ukhonkolo wamahhala
Olandelayo: Isitshalo sokubhaka ukhonkolo weselula
Isitshalo se-Auto Concrete Batching
Okuzenzakalelayo Central Ukhonkolo Batching Plant
Okuzenzakalelayo Compact Ukhonkolo Batching Plant
Okuzenzakalelayo Ukhonkolo Batching Ukuxuba Plant For Sale
Okuzenzakalelayo Ukhonkolo Batching Plant Factory
Okuzenzakalelayo Ukhonkolo Batching Plant For Sale
Okuzenzakalelayo Ukhonkolo Batching Plant eJalimane
Isimende Batching Concrete Plant
Usimende Ukhonkolo Batching Plant Machine
Intengo Yesitshalo Sokukhonkolo Sokukhonkolo
Ukucaciswa Kwesitshalo Sokhonkolo Esikhonkolo
Isitshalo Sokukhonkolo Sokhonkolo
Intengo Yesitshalo Sokukhonkolo Sokhonkolo
Izici 1.Convenient inhlangano disassembly, ukuhamba eliphezulu lenguquko, elula futhi fast, futhi ephelele umsebenzi indawo nezimo. Isakhiwo 2.Compact futhi enengqondo, high modularity design; Ukusebenza kucacile futhi ukusebenza kuzinzile. 4.Umhlaba ongaphansi, ukukhiqiza okuphezulu; Isistimu kagesi nohlelo lwegesi ifakwe okuphezulu nokuthembeka okuphezulu. Isitshalo sokuxubana kokhonkolo esingumakhalekhukhwini sikhiqiza ukhonkolo ...
Uhlobo lweBelt lokutshala ukhonkolo
Izici Isitshalo sakhiwa uhlelo lokubhaka, uhlelo olunesisindo, uhlelo lokuxuba, uhlelo lokulawula ugesi, uhlelo lokulawula umoya womoya nokunye okuhlanganisiwe, izimpushana, okufakwayo oketshezi namanzi kungenziwa kukalwe ngokuzenzekelayo kuhlanganiswe nesitshalo. Ama-aggregates alayishwe ukuhlanganiswa komgqomo ngumlayishi wangaphambili. Impuphu idluliswa isuka esilojini iye esikalini sesisindo nge-screw conveyor .Amanzi nesithasiselo se-liquid akhishwa esikalini. Zonke izinhlelo zokulinganisa ...
isisekelo sokubhaka ukhonkolo wamahhala
Izici 1. Isakhiwo samahhala sesisekelo, imishini ingafakwa ekukhiqizweni ngemuva kokuthi indawo yomsebenzi ilinganiswe futhi yaqiniswa. Hhayi nje ukunciphisa izindleko zokwakhiwa kwesisekelo, kepha futhi unciphise umjikelezo wokufaka. Umklamo we-modular womkhiqizo wenza kube lula futhi kusheshe ukuqaqa nokuhambisa. 3. Isakhiwo esihlangene jikelele, umsebenzi omncane womhlaba. Incazelo Imodi SjHZN0 ...
Yeqa ukuphakamisa isitshalo sokubhaka ukhonkolo
Izici Isitshalo sakhiwa uhlelo lokubhaka, uhlelo olunesisindo, uhlelo lokuxuba, uhlelo lokulawula ugesi, uhlelo lokulawula umoya womoya nokunye. Ama-aggregates amathathu, impushana eyodwa, okufakwayo okuketshezi okukodwa namanzi kungenziwa kukalwe ngokuzenzekelayo kuhlanganiswe nesitshalo. Ama-aggregates alayishwe ukuhlanganiswa komgqomo ngumlayishi wangaphambili. Impuphu idluliswa isuka esilojini iye esikalini sesisindo nge-screw conveyor .Amanzi nesithasiselo se-liquid akhishwa esikalini. Wonke ama-weighi ...
Ipulatifomu yamanzi yokutshala ukhonkolo
Izici 1.Kulungele ukukhiqizwa kokwakhiwa kwamanzi, futhi isakhiwo esikhethekile sihlangabezana nezidingo zamanzi ezungezile. Isakhiwo seCompact singanciphisa izindleko zokwakha zesikhulumi. Imishini inokuphepha okuphezulu futhi ingakwazi ukuzivumelanisa nokuhlala kwesisekelo sepulatifomu kanye nomthelela wesiphepho. I-4.Ihlonyelwe ngemigqomo emikhulu ehlanganisiwe, ukusuthisa kwesikhathi esisodwa kungahlangabezana nokukhiqizwa kuka-500m3 kakhonkolo (kungenziwa ngezifiso ...
Isitimela esisheshayo esizinikezele ukugoqa ukhonkolo ...
Izici 1.Modular design, elula ukuhlanganisa nokuqaqa, ukudlulisa okusheshayo, ukuguquguquka kwesakhiwo; I-2.Adopting high-efficiency mixer, ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu, ukusekela izinhlobo eziningi zobuchwepheshe bokuphakela, efanelekile ngezidingo ezahlukahlukene zokuxubana kokhonkolo, amabhodi alwelwesi nama-blades amukela okokusebenza kwe-alloy wear-resistant, ngempilo ende yokusebenza. Uhlelo lokulinganisa oluhlanganisiwe luzuza isilinganiso sokunemba okuphelele kokuhlanganiswa ngokwandisa i-d ...
Cha, 268, umgwaqo waseningizimu duandian, iJinan, iSifundazwe saseShandong